म स्वाभाविक र जनताले स्वीकार गरेको उम्मेदवार हुँ– नेता वड « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७३, शनिबार १९:१६
नेपाली काँग्रेसका धनगढी उपमहानगरपालिका सभापति नृप वड आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट मेयर पदका प्रबल दावेदार हुनुहुन्छ । २०४६ सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिबाट राजनीति सुरु गरेका वड दुई पटक नगर सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँ धनगढी नगर विकास समितिको समेत अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ । ऐश्वर्य विद्या निकेतन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत रहनु भएका उहाँ विभिन्न शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । आम काँग्रेस कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन छ– नगर सभापति वडको हरेक दिन कि पार्टी सङ्गठनमा खर्च हुन्छ, कि जनताका काम गर्नमा । ‘त्यसैले पनि म नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि स्वाभाविक उम्मेदवार हुँ’ आज (२७ गते) अत्तरियामा आयोजित काँग्रेसको प्रदेशस्तरीय आमसभा तयारीमा व्यस्त नगर सभापति वडले अनुमोदनसँगको कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो– ‘पार्टीका आमसाथीहरू मात्रै होइनन्, मलाई प्रत्येक वडाका जनताले पनि उत्तिकै स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।’ प्रस्तुत छ, धनगढी मेयर पदका लागि दावेदार नगर सभापति वडसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
– धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि तपाईँ दावेदार हुनुहुन्छ । किन ?
हेर्नोस्, म दुई पटक नेपाली काँग्रेसको धनगढी नगर सभापति निर्वाचित भए । काँग्रेसमा नै आफूलाई समर्पित गरेको छु । र, काँग्रेसलाई सङ्गठित र जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन निरन्तर प्रयत्नशील रहेको छु । नगर सभापतिका रूपमा मैले धनगढी उपमहानगरपालिकामा पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु भनेर पार्टीका सबै आदरणीय नेता, कार्यकर्ताले राम्ररी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु । स्थानीय निकाय झन्डै १४ वर्षदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिहीन रहेको अवस्थामा छ । यो अवधिमा मैले पार्टीका तर्फबाट नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गरेर जेजति पनि विकास निर्माणका काम गर्नसके, त्यसको पनि आम नगरबासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले राम्रो मूल्याङ्कन गर्नु भएको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले म स्वाभाविक र जनताले स्वीकार गर्ने उम्मेदवार हुँ भन्ने ठान्छु ।
मैले पार्टीको नगर सभापतिका रूपमा पार्टी र नगरका लागि जे जति पनि काम गर्न सकेको छु, त्यसलाई अझ व्यापक बनाउन चाहन्छु । यो उपमहानगरपालिकालाई मुलुककै सबैभन्दा सुन्दर, समृद्ध र सभ्य सहरका रूपमा विकास गर्ने मैले देखेको सपना पार्टीका साथीहरू तथा जनताको साथ र समर्थनबाट साकार पार्न चाहन्छु । लामो समयदेखि नगर सभापतिका रूपमा क्रियाशील भइरहँदा र पार्टी सङ्गठन सुदृढ गर्न बारम्बार प्रत्येक वडा, टोल, बस्तीमा पुगिरहँदा मैले यहाँका समस्या र चुनौती राम्रोसँग बुझेको छु । सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र फराकिलो बनाउने कुरा होस् वा व्यवस्थित ढल निकास, अथवा फोहोरमैला व्यवस्थापनको सवाल होस् वा हराभरा सहर होस्, अथवा खानेपानी लगायतका आम नगरबासीका आधारभूत सुविधाका कुरा हुन्, ती सबैमा मैले बारम्बार चिन्तन गरेको छु । त्यसैले पनि मेरो उम्मेदवारी स्वाभाविक हो ।
– नेपाली काँग्रेसबाट तपाईँले नै उम्मेदवारी पाउनुपर्छ भन्ने आधारहरू के छन् ?
मैले जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि निरन्तर पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउन लागेको छु । मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेयता कहिल्यै पनि अरू कुनै पेसामा लागिन । धन कमाउने वा अरू कुनै संस्था चलाउने काममा ध्यानसम्म गएन । पार्टीको हरेक आदेशलाई सिरोधार्य गरेर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील भइरहे । सधैँ पार्टीका सबै साथीहरूको साथमा रहे । आम जनताको कामलाई आफ्नो काम ठानेर पुरा गर्न लागिरहे । उहाँहरूलाई समस्या पर्दा आधा रातीको समयमा पनि खटिएको छु । पार्टीका विभिन्न इकाई, नेविसंघ, तरुण दल, महिला सङ्घसहितका भातृ सङ्गठन तथा सुभेच्छुक सङ्गठनका प्राय: साथीहरूको विश्वास र समर्थन पाएको छु । यी सबै मैले उम्मेदवारी पाउने बलिया र भरपर्दा आधार हुन् भन्ने मैले ठानेको छु । मलाई विश्वास छ, पार्टी नेतृत्वले आम कार्यकर्ता र जनताको भावनाको सम्मान गर्ने छ ।
दुई पटक नगर सभापति हुनुभयो, पार्टी र आम जनताका लागि के काम गरे भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हो, म दुई पटक धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर सभापति निर्वाचित भए । मैले फेरि पनि दोहोर्‍याए, यस क्रममा म निरन्तर पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउन र विस्तार गर्न लागिरहे । २०७० सालमा पार्टीका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्नु भयो । उहाँ अत्यधिक मतका साथ विजयी हुनु भयो । उपनिर्वाचनमा पुस्करनाथ ओझा जित्नु भयो । यो सबै काँग्रसको सुदृढ सङ्गठन तथा आम जनताको समर्थनका कारण सम्भव भएको हो ।
त्यस्तै, मैले सधैँ आम नगरबासीको चाहना र भावनाअनुसार नै विकास निर्माणका काममा योगदान दिएको छु । उदाहरणका लागि वडा नम्बर–४ स्थित शिवपुरीधामलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेको छु । अहिले त्यहाँ पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै, उर्मामा रहेको वेहडाबाबा मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने जनताको भावनाअनुसार अहिले त्यसका लागि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । मैले सधैँ नगरबासीसँग हातेमालो गरेर उहाँको भावनाअनुसार नै काम गरेको छु ।
तपाईँले धनगढी उपमहानगरपालिकाका विकासका समस्या र चुनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो । मैले यो उपमहानगरपालिकाका विकासका समस्या र चुनौतीको बोध गरेकोले नै मेयरको उम्मेदवारीका लागि दाबी गरेको हुँ । उपमहानगरपालिकामा मुख्य चुनौती भनेकै अव्यवस्थित रूपमा नगर विस्तार हुनु नै हो । ढल निकाय, फोहोरमैला व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । सडकहरू साँघुरा छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन समस्या हुँदै गएको छ । सहरका रूप लिइसक्दा पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित र आधुनिक बसपार्क बन्न सकेको छैन । यत्रो ठुलो सहरमा एउटा सभागृह समेत बन्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकामा रहेका सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर छ । मोहना नदी र नगरभित्रका खोलानाला अत्यन्त दुर्गन्धित छन् । डम्पिङ साइट बन्न सकेको छैन । व्यवस्थित हाटबजार छैन । यी र यस्तै थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले सुन्दर, व्यवस्थित र समृद्ध धनगढी सहरको आम नगरबासीको सपनालाई साकार पार्नुपर्ने छ । मैले केही ठाउँमा ‘भिजन’ भएको व्यक्ति चाहिन्छ जस्ता चर्चा सुने । हेर्नोस् म सधैँ काममा विश्वास गर्दछु । मेरो अनुभव नै मेरो ‘भिजन’ हो । भिजन भनेको कुनै भाषणको विषयवस्तु मात्रै होइन । मैले अवसर पाए भने मैले धनगढीलाई मुलुकै सबैभन्दा समृद्ध र सुन्दर सहर बनाउने अठोट लिएको छु ।
तपाईँलाई तपाईँको पार्टीले मेयर पदका लागि टिकट दिन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म सतप्रतिशत विश्वस्त छु । र, मलाई हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पंक्ति तथा आम कार्यकर्ताले मप्रति न्याय गर्नुहुनेछ भन्नेमा पनि विश्वासमा छु ।